‘प्रतिबन्धित विद्रोहीसग त्रासित भयो बहुमतको सरकार’ हरि श्रेष्ठ -
June 3, 2019 June 3, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on ‘प्रतिबन्धित विद्रोहीसग त्रासित भयो बहुमतको सरकार’ हरि श्रेष्ठ
नेपालमा सत्ता र विद्रोही गरी दुई खालको समुहलाई दोद्ध भइरहेको छ । जहाँ आज नेपालमा नेकपा विद्रोही र सत्ताको नेकपावीचको अन्तर टकरावका कारण आज देश अन्योलमा फस्न लागेको छ । जहाँ नेकपा विप्लव समुहसँग सत्तारुढ नेकपाको सरकार त्रासित वनेको देख्न सकिन्छ । जहाँ प्रतिवन्द लगाएको १ महिनामा सम्पुर्ण गतिविधि निर्मुल पार्छु भनी ओली नेतृत्वको सरकारको अगाडी नेकपा विप्लव समुहले आज आफ्नो गतिविधि अगाडी वढाएर अन्ययको विरोधमा लड्दै जादा आज यो संसदीय सरकार त्रास त्रास भएको पाइएको छ ।
जहाँ आफ्ना नेता कार्यकता हिरासतमा लिएको विरुद्धमा होस आफ्ना संगठनको नेताको सत्ता पक्षले हत्या गरेको विरुद्धमा नेकपाले अहिलेसम्म प्रतिवन्ध गरेदेखि यता पटक पटक नेपाल वन्द गरी जता ततै वम पड्कन थालेपछि आज सत्ता आछु आछु भएको पाइएको छ । गृहमन्त्री समालेका राम व थापा वादलले संसदको अगाडी नै वम राख्ने वा वम पड्काउने व्यक्ति नेपाली नगरिक नभएको गैह जीम्मेवारीका कुरा गर्न थालेका छन । जहाँ आफु वस्ने सिहदरवार नजिक वम विस्फोटन हुन्छ । वन्दमा जताततै वम भेटिन्छन । त्यपछि जनयुद्धको झल्को दिनेगरी नेपाली जनता क्रान्तिमा लगेपछि आज सरकार हताहत भएको पाइएको छ ।
जसमा २०७५ साल फाल्गुन २८ गते प्रतिवन्द लगाएर विद्रोही नेकपा विप्लव समुहलाई १ महिना भित्र सिध्याउने ह्रवाई फिजाएको सरकारले त्यसको लगतै विभिन्न ठाउँवाट नेता कार्यकता धरपकट गरी हिरासतमा लिने काम भयो तर त्यसको प्रतिक्रिया नेकपा विप्लवले आफु माथि लगाएको प्रतिवन्ध झुटो भएको र पक्राउ परेका कार्यकता रिहाईको माग गर्दै पटक पटक नेपाल वन्द गरी सक्दा उसको गतीविधि तिव्र भएपछि नेपाल सरकारको सातो गएको छ ।
२०७६ जेठ १३ गते गरेको नेपाल वन्दको अघिल्लो दिन उपत्यकामा दुई ठाउँमा छुटाछुटै वम विस्फोटन सिंहदरवारको छेउ अनामनगर घघेकुला र सुकेधारामा वम विस्फोटन भएपछि सरकार झन त्रासित भएको पाइएको छ । यसमा पनि वम विस्फोटनमा विद्रोहीका कार्यकता मरेपछि सरकारललाई ठुलो धक्का परेको देख्न सकिन्छ । नेकपा विप्लवले नेतृत्व गरेको पाटीका नेता कार्यकता आफ्नो व्याक्ति गत स्वार्थ नभई देश र जनताका लागि लागेका रहेछन , भन्ने एउटा प्रमाणीत भयो । त्यसमा पनि विद्रोही अन्ययको विरोधमा आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार हुर्दा रहेछन भनी प्रमाणी भएपछि लटेर खाने सरकारको टाउको दुखेको छ ।
अर्काे देश दोह्री संसदीय व्यावस्था चलाएका सरकारलाई आफुले लुटेर खाएको कसुर थाहा पाए सिदाइदिन्छन भन्ने डर त्रास पैदा भएको छ । यसवाट नेपालको परिवर्तको लागि लडेका व्याक्तिलाई आज सरकारका वस्ने दलले त्रासित हुदै विभिन्ने भ्रम फैलाउन थालेका छन । जहाँ प्रधामन्त्री केपी अलीको भनाई अनुसार आतकंकारी भन्नु उस्को भाव के हो ? भनी प्रश्न गरेको पाइएको छ । आफु सरकारमा वसेर सुरक्षा अङ्गलाई गोली हान्न लगाउने नेपाली नगरिकको हत्या गर्न लगाएने ग्रह मन्त्रीले देश भक्त क्रान्तिकारीलाई यो देशको नागरिक होइन भने अविव्यत्ति दिन थालेका छन ।
त्यसैगरी जुन समुहले लड्ेर ल्याएको गणतन्त्रमा आफु राज गर्ने प्रधान मन्त्री वन्ने त्यो जनसमुहलाई प्रविवन्ध लगाएर अवराधिक समुह भन्दै वाहिर राखि राज्य चलाउन खोज्ने र हिजो सामान्तवादी राजासग सडगाठ भएकाले आज फेरी हिजो जनयुद्ध कालमा आतककारी भनी सिध्याउन खोज्ने आज त्यही समुहले लडेर ल्याएको गणतन्त्रका हजारौ राजा भएर देश सक्ने व्याक्तिले आज हिजो मुद्दा पुरा गर्न हिडेका युद्धालाई आतंककारीको माग के भन्न मिल्छ मिल्दैन ? जो हिजो आतंककारी घोषणा गरेका मान्छेले ल्याएको गणतन्त्रमा आफु दलाल राज्य सत्ताखडा गरी मोज गर्ने फेरी त्यही समुहलाई आतंककारी भन्ने दिमाग ठिक छ छैन नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ ।
त्यसमा पनि हिजो तिमी सत्तामा राजासँग सठगाठ गरेर बसेको वेला जनयुद्ध लड्न जानु भन्दा पहिला २०५२ सालमा वुझाएका ४० वुदा पुरा गर त्यही हो विद्रोहीको माग हिजो सरकारमा रहदा तिमीलाई वुझाउको कुन कुन माग पुरा ग¥यो । पल्टाएर हेर्न नेपाली जनताले अनुरोध गर्दछन सारकारलाई यही हो विद्रोहीको माग । त्यसमा पनि केपीओलीले वा यो सरकारले मानव अधिकार हनर्न ग¥यो भनी आज आरोप लगाउनु भयो । विद्रोहीले कहाँ मानव अधिकार हनन गरेको छ । यसका पनि यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छन नेपाली जनता आफुले वनाएको संविधान आफैले पल्टाएर हेर्न अनुरोध गर्दछन ।
विद्रोहीले मानव अधिकार हरण गरेका छ कि सरकारले वुझ्न जरुरी देखिन्छ । जहाँ शान्तिपुर्ण शार्यक्रममा सुरक्षा अङ्ग पटाएर गोली हानी नेपाली जनताको हत्या गर्न सरकारले लगाउछ । घरमा वसेका वाटो हिडेका मानिसलाई हिरासतमा लिई याताना दिन्छ । विश्वको ठुलो अङ्ग कानुनले फैसला गरेको कुरा सरकार मान्दैन । मानव अधिकारशान्ति सुरक्षा दिन आउदा मानव अधिकारको गाडीवाट मान्छे थुर्छ यसमा कसले मानव अधिकार हनन गरेको हो सरकार लगयत सम्पुर्ण बुद्धीजीले बुझेका छन । यसलाई मध्य नजर राख्दै आज सरकार त्रसित भनेर कहिले के भन्ने कहिले के भन्ने गरेको पाइएको छ ।
यसरी आज मुलुकमा भएको दोद्धको विउ रोप्ने काम आज सरकारले गरेको छ । यसलाई निर्मल पार्न कुनै पनि राजनितिक संगठनलाई प्रवन्द होइन फुकुवा गरी वाताको वातावरण वनाउन जरुरी देखिन्छ । यसमा वाता भन्ने विद्रोहीका कार्यकता नेता हिरासतमा लिने गर्न थाल्यो भने एक व्यक्तिवाट १० व्याक्ति जन्मन सक्छ । जहाँ देखि सकेको छ । हिजो प्रतिवन्ध लागाएको एक महिनामा सम्पुर्ण विदोही नेकपा महाँ सचिव विप्लवलाई निर्मुल पार्छु भन्ने सरकार आज फेरी डेड महिनाको हारा हारीमा विप्लवका ३ हजार जनमुत्तिसेना ४ कम्पनि भएको अविव्यक्ति दिन थालेको छ ।
त्यसमा पनि हिजो ५०० जना विप्लवका नेता कार्यकर्ता छन भन्ने ग्रह मन्त्री आज लडाखु मात्र ३००० छन भन्न थालेका छन । अर्काे कुरा हिरासतमा लिएर सक्छु भन्ने यो सरकार आज ४१२ जना कार्यकता नेता हिराशतमा लिदा पनि फेरी ३००० लडाखु छन भन्न थालेको छ । यो सवै नेकपा विप्लवले गरेको देशभक्ति आन्दोलनमा नेपाली जनताले साथ दिए पछि सरकार हार खाएर त्रसित वनेर दिएको अविव्यक्ति मान्न सकिन्छ ।
लेखकको निजी विचार हो
१ सय ४४ जना यात्रु बोकेर उडेको विमानमा बम !
किसानहरुको लागि अब भूमि बैंक र सामूहिक खेतीको ब्यवस्थापन हुने, यस्तो छ योजना !